Ukubetha i-headphone ye-solo3 kwintengiso e-amazon kunye nokuthenga okungcono
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Idili: Gcina i-80 yeedola kwi-Apple & apos; s Beats Solo3 ii-headphone ezingenazingcingo eAmazon nakwiiBest Buy
Idili: Gcina i-80 yeedola kwi-Apple & apos; s Beats Solo3 ii-headphone ezingenazingcingo eAmazon nakwiiBest Buy
Iapile kunye neapos; s Beats Solo3 ii-headphone ezingenazingcingo bezithengiswa amaxesha amaninzi kunyaka ophelileyo okanye njalo , kodwa ukuba uphulukene nala mathuba okuthenga iperi, ufumana enye ngoku.
Zombini iiAmazon kunye neZona zibalaseleyo zokuthenga zinayo Ubetha uSolo3 Kuthengiswa nge-220 yeedola kuphela, ke wena kunye ne-apos; uza kugcina i-80 yeedola kwi-MSRP. Nangona kunjalo, ayisiyiyo yonke imibala eyahlukileyo eye amaxabiso ayo athotywa nge- $ 80, kodwa iimodeli ezimhlophe nezimnyama ngokuqinisekileyo ziphakathi kwexabiso eliphantsi.
Umzekelo, iMatte Gold Beats Solo3 ithengiswa nge-260 yeedola, oko kuthetha ukuba i-apos; uza kugcina kuphela i-40 yeedola. Kukwanjalo ukuya kuMatte Isilivere kunye neAsphalt Grey eyahlukileyo. Kwicala eliqaqambileyo, imodeli yeGloss Black ixabisa nje i-215 yeedola, ke wena kunye ne-apos; uya kugcina i- $ 5 eyongezelelweyo ukuba ukhetha lo mbala.
Ngokucacileyo, bobabini abathengisi baseMelika babonelela ngokuhambisa simahla. Nantsi into & iiapos ezibandakanyiweyo ebhokisini: Intambo ye3.5mm ye-RemoteTalk, imeko yokuphatha, isikhokelo sokuqala ngokukhawuleza, intambo yokutshaja ye-USB, kunye Ubetha uSolo3 ii-headphone ezingenazingcingo.
umthombo: IAmazon , Eyona Ntengiso
Ukunxiba i-Android 2.0 zenwatch 3
Ungayithenga phi iPixel 4a: ukujongana kunye namaxabiso kwiVenkile kaGoogle, Eyona nto ithengwayo kunye neVerizon
Iimaphu zikaGoogle ngoku zikunceda ukhumbule apho upake khona imoto yakho
Qaphela i-7 S Pen incam yebhola yebhola yebhola yebhola: ngaba iyahambelana kwiNqaku lesi-5 kunye neNqaku le-4 kunye neepeni ze-S?
Ixabiso lokuvuza kwendawo yeOfisi yedepho ye-Samsung Galaxy Tab 2 (10.1)
Ungazithatha njani iifoto zomlilo ngekhamera ye-smartphone (i-iPhone kunye nesifundo se-Android)
Ukanti omnye umphathi wase-US usungula inethiwekhi ye5G yelizwe liphela
Kubonakala ngathi iPixel 4a 5G sele iza kuyekiswa